Imbali emfutshane 'Yobusuku Bokubonisa'
Iinkcukacha Eziqinileyo Ngokuthi 'Uluhlu Lwama Tonight'
Umkhosi okhoyo: uJimmy Fallon
Jay Leno (Matshi 2010 ukuya kuFebruwari 2014)
Conan O'Brien - Juni 2009 ukuya kuJanuwari 2010
Jay Leno - 1992 ukuya ku-2009
UJohnny Carson - ngo-1962 ukuya ku-1992
Jack Paar - 1957 ukuya ku-1962
USteve Allen - 1954 ukuya ku-1957
Ikhokeli yeBhodi yangoku: iQuestlove
Iikhokeli zeBhodi zangaphambili:
URickey Minor - ngo-2010 ukuya ku-2014
UMain Weinberg - ngo-2009 ukuya ku-2010
Kevin Eubanks - ngo-1995 ukuya ku-2009
I-Branford Marsalis - 1992 ukuya ngo-1995
Doc Severinsen - 1967 ukuya ku -9999
UMilton DeLugg - 1966 ukuya ku-1967
Skitch Henderson 1962 ukuya ku-1966
UJoseph Melis - 1957 ukuya ku-1962
Skitch Henderson - 1954 ukuya ku-1957
Ibhodi: Iinjongo (i-Tonight Show Band)
Ummemezeli wangoku: uSteve Higgins
Ifomathi: Iyure enye, i-classic host-back-desk
Ulwazi lo sasazo: I- NBC, ii-weeknights, 11:35 ntambama ukuya ku-12: 35 nge-ET
Iifayile: Iintsuku zeveki, ezivela kwiNew York City.
Umhla woNkulumbuso: 1954, kunye noSteve Allen
Imbali emfutshane ye-Modern Tonight Show '
I-Tonight Bonisa ngokulandelelanayo ukulandela umgangatho wesithandathu-ntetho, ifomathi yokubonisa intetho yebusuku. Umboniso ::
Uvula nge-monologic topical.
Ulandele ibhanti kunye ne-comedy bit emva kwideski yomboniso womboniso okanye umzobo
Yamkela isivakashi sakhe sokuqala
Utshintshi ngomdwebo wekomidi
Yamkela isivakashi sesibini
Ugqiba ngomculo wokugqibela okanye umculi wokugqibela
UJimmy Fallon waba ngumkhosi wesithandathu we -Tonight Show ngoFebruwari.
17, 2014. Waphumelela ku-Jay Leno, owagqiba ukhenketho lwakhe lwesibini ngomhla weFebhuwari 6, 2014.
Uguquko oluvela eLeno ukuya kuAgonon lwahamba ngokugqithiseleyo njengoko iNBC yayiyithemba. Ukuguqulelwa kwangaphambili kwindwendwe akuzange kuhambe kakuhle.
Umntu owayengumhlali uConan O'Brien wangena kwiJay Leno ngoJuni 1, 2009, ngethuba lokuguquka ngokucophelela okwenziwe kwithuba eliphantse iminyaka emihlanu.
ULeno wamemezela isigqibo sakhe sokuthatha umhlala-phantsi kwi -Tonight Show ngo-2004, kwaye u-O'Brien wuleza wabizwa ngokuba ngumlandeli wakhe.
Nangona kwakukho ixesha elincinci ngokukhawuleza ekupheleni kuka-2008 nakwiminyaka yokuqala ka-2009 xa iLeno ibonakala inqanda imbono yokushiya i -Tonight Show , utshintsho lwaluhlelekile. Mhlawumbi ngenxa yokuba iLeno yanikezwa umboniso omtsha wexesha, umboniso we-Jay Leno, owaqala ngoSeptemba 2009.
NgoJanuwari 2010, ngenxa yokulinganisa kweLeno kunye nokusongela kwizikhululo ezibandakanyekayo ezazifuna ukuhlahlela i- Leno ngenxa yeminye inkqubo, i-NBC ifake icebo lokubuyela eLeno kwindawo yakhe ngo-11: 30. Oko kwakuquka ukuhambisa i -Tonight Show ukuya phakathi kobusuku. U-O'Brien akazange avumelane kwaye wakwazi ukuhamba kude nombukiso ongenakunqandwa.
ULeno wabuyela njengomntu we -Tonight Show ngo-Matshi 2010.
U-O'Brien wayengaziwa ukuba azalise izihlangu ezinkulu. Ngaphandle kokuthatha i -Tonight Show ukusuka kwiNombolo 1 yokuhlwa ebusuku, uLeno, u-O'Brien wabizwa ngokuba ngu-David Letterman emva ko-1993 xa i-Letterman yakhetha ukushiya i-NBC kunye neLate Night ye-CBS kunye neLate Show .
Utshintsho olulandelayo lulandele imfazwe ephikisanayo yoLonight Show Desk. Umntu owayengumqhubi uJay Leno walwa nzima ukuze athole igig emva kokuba uJohnny Carson amemezele ukuhlala phantsi kwakhe ngo-1992. Uninzi becinga ukuba i-gig yayiya kwi- Latate host host Letterman-kuquka i-Letterman.
Uninzi lwe-opera yesepha-njengembali ye-behind-the-scenes yenguqu ichazwa kwi-best-selling yeLate Shift nguBill Carter.
Umhlalaphantsi wesiBini sikaJay Leno
Ngo-Ephreli 2014, uLeno wamemezela umhlalaphantsi wakhe wesibili ukusuka kwi -Tonight Show . Oku emva kwemfazwe embi yamagama kunye ne-NBC. Ngelo xesha, i-NBC yabhengeza ukuba i- late Night hosted uJimmy Fallon yayiza kuthatha iLeno njengomncedisi ngo-2014.
I-Tonight ibonisa yona inembali egxininisiweyo, iqalise kwifomu yayo eyaziwayo ngo-1953 kunye noSteve Allen njengomninimzi. Xa u-Allen ethatha umhlalaphantsi, lo mboniso wabizwa ngokuba nguLwesithathu! IMelika Emva kokumnyama kwaye ilandele ifomathi kufuphi ne - Today Show , eyayisithandwa kakhulu ngeli xesha.
Akuzange ihlale ixesha elide, nangona kunjalo, ngowe-1957, uJack Paar wangena kwindlalifa. I-Paar yayidla ngokuhamba embukisweni ngo-1960 emva kokuba i-networkers censors isuse ingxenye yeprogram yakhe.
Wahamba ngokoqobo, eshiya ummemezeli wakhe, uHugh Downs, ukugqiba inkqubo. I-Paar yabuya inyanga kamva. Amazwi akhe okuqala athi: "... Njengoko ndathetha ngaphambi kokuba ndiphazamiseke ..."
I-Paar yaphumelela nguYohnny Carson, ngokuqinisekileyo ummkeli ojongene kakhulu ne -Tonight Show njengoko ikhoyo namhlanje. I-Carson yabamba iprogram malunga neminyaka engama-30, edala abalinganiswa abangazikhunjulwa njengoCarnac oMkhulu kunye no-Art Fern. UCaronon wayenomdla oqeshwe ngabamkeli beendwendwe xa ehamba eholide (kuquka noJoan Rivers, uBob Newhart , uJerry Lewis kunye noDavid Letterman), isithethe esasiye sashiywa ngokupheleleyo kwaze kwaba yilapho inani labantu linyuka ukuya kwi- Late Show xa i-Letterman yahlinzwa.
Namhlanje, i-Fallon iqhuba i -Tonight Show kwikhulu lama-21, isizukulwana X esiya kubaphulaphuli baseMillennials abalindele ukuba imikhosi yasebusuku idibeneyo ukuba ibandakanyeke kumajelo asekuhlaleni, kwiinkonzo zokuthungela idijithali, kunye nokudala amaxesha athathakayo.
Zonke ii-Cameos zeFowuni zeFowuni ezivela kwi-1960s i-Batman TV Series
Kutheni "i-Masterchef" Ixesha leNtsuku eZihlanu liye laphazamiseka
Indlela Yokubakho Indwendwe kwi "Jerry Springer Show"
Biography kaCharlie Rose
Ngaba i-Cheerleading ngokwenene iMidlalo?
Yiyiphi imbali yedolophu?
Uthetha Njani Haleluya?
Ngaba Kufuneka Ube Ngumntu Oyilungeleleneyo Ukuba Usebenzise Isikolo Sonyango?
Ukuchasana Okukhulu Phakathi kweAnglican neKatolika
Iingoma eziphezulu ze-AC / DC zee-80s
Ukuguqulwa kweMerika: iMfazwe yase-Oriskany
Imfazwe ye-1812: Izizathu zokuxabana
Ukulawula i-Oak Oak-Plant and Grow a Oak Live
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele uJohn C. Frémont
Yintoni i-Carbon Nanotubes
Isistim seSkeletal kunye neMisebenzi yeThambo
Iziphumo, Ukungabi sohlwayo
Indlela yokuDlulisa phambili kwiCrossovers KwiSikethi zeSikethi
Kutheni Iinqwenkwezi Zivuthayo Kwenzeka Kanjani Nezifa?
I-Mask Squeeze - Amehlo Abomvu kunye namahlombe aseBruce Emva koScuba Diving
I-Fairmont State University Admissions